CoreMelt ၏သောကြာနေ့အနက်ရောင်အပေးအယူများသည်မပြီးဆုံးသေးပါ။ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » CoreMelt ရဲ့ Black ကသောကြာနေ့အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်သို့ရာတွင်ကျော်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်!
CoreMelt ရဲ့ ကြောက်မက်ဘွယ်သော Black ကသောကြာနေ့ရောင်းချ ဒီဇင်ဘာလ 1st မှတဆင့်နေဆဲရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်သင်ကျိန်းသေရွေ့လျားမှုတင်းပလိတ်များပေါ်တွင်သူတို့မယုံနိုင်စရာကမ်းလှမ်းမှု၏အားသာချက်ယူရန်လိုအပ်ပါတယ် အဆိုပါ VFXMarket အပိုင်း features တွေ 50% ကိုချွတ် သူတို့ရဲ့ဖက်ရှင်ကိုအတိအကျရှာရန်နှင့်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုကို collection များကို, နည်းပညာ, Real Estate များနှင့် retro ပုံစံနှင့်ပုံပြဘောပင်များနှင့်မှင်အတွက်မင်္ဂလာဆောင်, ဒါ့အပြင် CoreMelt ရှိရပ်တန့်မပေးပါ။ အားလုံးလက်ခံရယူ ချွတ် 30% မှာ CoreMelt plugins ကိုများနှင့် plugin ကိုအစုအဝေးကိုထုပ် စက်မှုလုပ်ငန်းအယ်ဒီတာများ, DOP ရဲ့နှင့် colorists ထံမှအပေါငျးတို့သစည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုအရာ chromatic အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည် plugin ကိုအပါအဝင်ရောင်းချစဉ်က။
လူအပေါင်းတို့သည် plugins ကိုပေါ်ဤအကြောင်းအထူးလျှော့စျေးလက်ခံရရှိရန် FRIBLK17XX: ကူပွန်ကုဒ်ကိုသုံးပါ ကုန်ပစ္စည်းမှာ!
အဆိုပါ 5-pack ကိုအထူးများအတွက် VFXMarket browse ဖို့ go: coremelt.com/collections/5-packs-all
MeltCore ရဲ့ကြောက်မက်ဘွယ်စုစည်းအထုပ် browse ဖို့နဲ့အရာအားလုံးအထုပ်နှင့်အတူ 50% ကျော်သိမ်းဆည်းဖို့ go: coremelt.com/collections/bundles
: ရော်ဂျာဘော်လ်တန်, CoreMelt Plugins တွေကို၏တည်ထောင်သူနှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးထံမှ "chromatic အတူငါတို့သည်သင်တို့တစ် plugin ကိုတစ်ခုလုံးကိုငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည် suite ကိုပေးစေခြင်းငှါကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်ဖြေရှင်းချက် Track မျက်နှာဖုံးများအဖြစ်အားလုံးပုံမှန်အတိုင်းကွေး, ရထားဘီးနှင့်ရွေးချယ်အရောင်နှိပ်ရင်တွေ့နိုင်ပါဝင်သည်။ အဲဒီရုံက start ရဲ့လွှတ်ပေးရန်ကတည်းကကျနော်တို့ထားပြီးတန်းဂျဂယက်ထ controller ကိုများအတွက်အထောက်အပံ့ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ယခုတစ် X ကို RITES နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အရောင်ဇယားကိုသုံးပြီးအလိုအလျောက်ချိန်ခွင်လျှာအထောက်အပံ့ကိုထည့်သွင်းဖို့အကြောင်းကိုများမှာပြီ။ "
CoreMelt FCP7 နှင့် FCP X ကိုနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်သူတို့ရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်ရန်လဲ tutorial တစ်ခုကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းပေးထားအဖြစ်, Premiere Pro ကို! နည်းပညာပံ့ပိုးမှုမှတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ကနေအပိုင်းတစ်ခုပေါများခင်းကျင်းတပ်ဆင်ထားသည့်၎င်းတို့၏ထောက်ခံမှုအပိုင်း, quickstart လမ်းညွှန်စနစ်လိုအပ်ချက်များကို, checkout နှင့်ဗွီဒီယိုများကိုကူညီဖို့ရန်သေချာစေပါ!
CoreMelt ရဲ့မစ်ရှင်ရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်တတ်နိုင်စျေးနှုန်းများမှာဗီဒီယိုကအယ်ဒီတာများမှအစွမ်းထက်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် tools တွေကိုဆောင်ကြဉ်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့အမြင့်ဆုံးအဆုံးကနေအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု tools တွေကိုယူနဲ့ Desktop software ကိုအတွင်းပိုင်းကိုသင်ထံသို့ဆောင်ခဲ့ရမည်။ အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်နှင့်မြင့်မားသောအဆုံးရုပ်သံကြော်ငြာများတွင်အတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ပေါင်းအသုံးပြုခြင်းကျနော်တို့သုံးစွဲဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software ကိုရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိစေရှုပ်ထွေးအသုံးပြုသူ interfaces ပြန်ဆန်းသစ်။ ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ငါတို့အသုံးပြုသူများတုန့်ပြန်ပေါ်ကိုယျ့ကိုယျကိုဂုဏ်ယူ။
CoreMelt Pty Ltd မှသူ၏စာရင်း feature ကိုရုပ်ရှင်ခရက်ဒစ်၏ "လက်စွပ်၏သခင်", "ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်" နှင့် "ချာလီနှင့်ပါဝင်သည်ရော်ဂျာဘော်လ်တန်, post ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် 15 နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူတစ်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုဝါရင့်နှင့်ကတည်ထောင်ကာသြစတြေးလျပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ချောကလက်စက်ရုံ "။ ရော်ဂျာဟာအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး, အကြီးတန်းလျှံအော်ပရေတာများနှင့်ခဲစာစီအားလုံးအာရှကျော်အဖြစ်ဗြိတိန်နှင့်သြစတြေးလျ၌ရှိသကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။
တစ်ဦးကအပြည့်အ VFX ဇီဝနှင့် showreels ဤနေရာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်: VFX ဝက်ဘ်ဆိုက်.
CoreMelt Pty Ltd မှ, ဆစ်ဒနီ, သြစတြေးလျနှင့်ဘန်ကောက်တွင်ရုံးခန်းရှိပါတယ်ထိုင်းနှင့်အင်တာနက်မှတစ်ဆင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်ရောင်းချနှင့် ပြန်လည်ရောင်းချသူများ အမေရိကန်, ဗြိတိန်နှင့်ဂျပန်၌တည်၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုနိုင်သည် ကျေးဇူးပြု. contact form အားလုံး Non-နည်းပညာပံ့ပိုးမှုမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့။
CoreMelt နှင့်ဆလင်ဒါလိုဂို၏လိမ္မော်ရောင်အနား6ဘက်ရှိပုံ, PolyChrome ကူးအပြောင်း, ImageFlow FX, အဆိုပါလျှံ V2 လိုဂိုနှင့် "သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာပိုမိုဝက်အော်ရ" CoreMelt Pty Ltd ၏အမှတ်တံဆိပ်သည်ဤ website ကိုမူပိုင် CoreMelt Pty Ltd မှ 2009 ACN 134 625 095 အပေါ်အားလုံးအကြောင်းအရာဖြစ်ကြသည်။
post ကိုထုတ်လုပ်မှု လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် 2017-11-30
ယခင်: လွတ်လပ်သောပြဇာတ် Feature ကိုများအတွက်လိုင်းထုတ်လုပ်သူ
နောက်တစ်ခု: Dalet ဂျပန်နယူးဖြေရှင်းချက်ဗိသုကာခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းနှင့်အတူမီဒီယာအတိုင်ပင်ခံနှင့် Professional ကန်ဆောင်မှုများတိုးချဲ့